Izinzuzo zamapaki amahlathi asemadolobheni ngokumelene nokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezenzo eziningi zokusiza ukulwa nokushisa komhlaba. Okuyinhloko ukunciphisa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa emkhathini. Kepha senzani ngamagesi asevele esemkhathini?
Amahlathi amunca i-CO2 emkhathini ngesikhathi senqubo ye-photosynthesis. Kodwa-ke, ngenxa yokwanda kwabantu nokwanda kwamadolobha, asinayo indawo yamahlathi. Singasiza kanjani ukuvimbela ukufudumala kwembulunga yonke?
1 Imiphumela emihle yezimila zasemadolobheni
2 Iphrojekthi Yamahlathi Asheshayo Emadolobheni
3 Inqubo yokutshala ngaphandle kokuchelela
Imiphumela emihle yezimila zasemadolobheni
Emadolobheni, ukuhlelwa kwendawo kuyinto ithuluzi elidingekayo ukusabalalisa izikhala nokwabela ukusebenza nokusetshenziswa komhlaba okuthile. Ekuhleleni okuhle kwendawo, amapaki nezihlahla ezindaweni ezisemadolobheni azikwazi ukungabikho. Izimila ezisemadolobheni zinikeza izinzuzo eziningi endaweni yamadolobha.
Omunye wemiphumela emihle ukuhlinzeka ngezindawo zokuzithokozisa kubantu basemadolobheni lapho izingane zingazijwayeza imvelo futhi zichithe ntambama ngaphandle, umkhuba onempilo kakhulu kubuchwepheshe bethu bamanje.
Omunye umphumela ukuthuthukisa izimo zezulu kusukela ezimileni isebenza njengesihlungi futhi ibhuleke ngejubane lomoya futhi ayivumeli izinhlayiya eziningi kangaka zothuli zihudulwe, ngaleyo ndlela kuveze ukuguguleka kwenhlabathi.
Izitshalo zasemadolobheni nazo zisebenza njenge ukuncipha komsindo. Ithrafikhi, isiminyaminya, amazinga aphezulu okungcoliswa komsindo, njll. Yimisuka eyinhloko yomsindo futhi uhlaza luzosebenza njengesikrini se-acoustic, njengamapaneli emigwaqweni emikhulu yezindlu eziseduze.
Ekugcineni ukunciphisa ukungcoliswa kwemvelo njengoba izitshalo zimunca intuthu ekhishwa yizimoto futhi zizonciphisa umphumela ongcolisa we-SMOG (umphumela obukeka njengenkungu ekuseni lapho ubuka idolobha ukude).
Iphrojekthi Yamahlathi Asheshayo Emadolobheni
Imayelana nokukhuthaza ukufakwa kwamapaki amahlathi asezindaweni zasemadolobheni anezinhlobo ze-autochthonous. Lezi zindlela azidingi ukuchelela futhi zizokonga izindleko eziningi emanzini nasekugcinweni kokuphathwa komasipala.
Le phrojekthi ivezwe ku- ICasa Encendida eMadrid. Inhloso yephrojekthi ixhaswe ngokuhlanganyela yiLife + Programme futhi ibandakanya ukwakhiwa kwezindawo eziningi eziluhlaza emadolobheni ngokusebenzisa izindlela ezinhle zokuqalisa, ukubamba iqhaza nokuphathwa kwamahlathi asezindaweni ezisemadolobheni.
Ngokwedatha efundwe, izindawo ezinikezelwe endaweni eluhlaza ngendawo engaphezulu kwendawo yasedolobheni yasedolobheni laseSpain zikhona kuphela phakathi kuka-2 no-5%. Kodwa-ke, endaweni yase-Anglo-Saxon bayanikezela cishe i-30% yensimu izikhala eziluhlaza.
Umqondo wamahlathi asezindaweni ezisemadolobheni uthuthuke kakhulu ezweni lama-Anglo-Saxon kunaseMedithera.
Inqubo yokutshala ngaphandle kokuchelela
Ukonga izindleko zokuphatha komasipala nokonga emanzini lapho kubhekene nesomiso, kuphakanyiswe uhlelo lokuqalisa izikhala eziluhlaza ngaphandle kwesidingo sokunisela. Phakathi kwamasu asetshenzisiwe ukuqinisekisa ukumelana nokushisa kwezitshalo kubalwa ukufakwa kwe-mycorrhizae, okuyisikhunta esisiza isitshalo ukuba sigcine amanzi futhi sibe namandla amaningi.
Kuzosetshenziswa nendlela yokugcina amanzi. Lawa ngama-polymers asetshenziswa ezimpandeni zezihlahla ukuze akwazi gcina umswakama uma lina.
Izinzuzo zokwakha amahlathi asezidolobheni akuzona nje kuphela ukwakhiwa kwama-microclimates maqondana nensimu, kepha futhi usize ekuhlanzeni umoya naphansi, nasengxenyeni yezokungcebeleka ngokomphakathi. Abantu bajabulela ihlathi ngaphezu kwepaki elingenazo izihlahla.
Kukhona nezinye izinzuzo nezinzuzo, ngaphandle kwalezi zemvelo, njengezenhlalo nezomnotho ngangokunokwenzeka kube ukusetshenziswa kwezihlahla amahlathi ukuze akwazi ukukhiqiza amandla we-biomass noma umquba.
Lesi sinyathelo kungaboniswana ngaso kuwebhusayithi ye-Quick Urban Forestación.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izinzuzo zamapaki amahlathi asemadolobheni ngokumelene nokushisa komhlaba